Mercari vs Poshmark: oo ah meheradda ugu wanaagsan e-commerce ee 2022
Bogga ugu weyn Mercari vs Poshmark: oo ah meheradda ugu wanaagsan e-commerce ee 2022
Mercari vs Poshmark waa aalado eCommerce oo cajiib ah oo dadku ay ku barwaaqoobayaan maalmahan laakiin adeegyadan keebaa u baahan?
In kasta oo cudurka faafa ee coronavirus uu sababay xannibaad aad u badan ama laba ka mid ah inta badan magaalooyinka adduunka, kororka weyn ee ganacsiga e-commerce ma ahan mid lama filaan ah.
Iyada oo ay dadku hadda u janjeerayaan meheradaha ganacsiga e-commerce-kaliya maahan ikhtiyaarka badbaadsan laakiin sida ugu fudud oo laga yaabo xitaa qorshe dhaqso leh, waa lama huraan in isbarbar-dhig lagu sameeyo adeegyo ganacsi oo kala duwan.
Laba ka mid ah aaladahaan e-commerce ayaa caan ka noqday bilihii la soo dhaafay waxayna sare u kaceen darajooyinka madal e-commerce; Mercari iyo Poshmark, iyo Doodda ayaa ka dhalatay midka midkood uu bixinayo adeegyada iyo siyaasadaha ugu wanaagsan sannadka 2022 -ka.
Mercari vs Poshmark: Dagaalkii Sarreynta
Miyaad dareentaa inaad haysato waxyaabo badan oo qashin ah, aan la isticmaali karin, iyo alaabtii hore? Ha tuurina, waxaan u malaynayaa inay ku taageeri karto inta qof ee raadineysa shaygaas saxda ah. Samee lacag degdeg ah! Ku iibso internetka.
Mise dukaan ayaad ku leedahay xaafaddaada. Intee in le'eg ayaad kasban doontaa haddii xirashadaadu ay u soo baxdo malaayiin qof maalin kasta oo ka soo horjeedda laba boqol oo qof oo kaliya u socda inay ku garaacaan, suuqgeynta internetka waa xanaaqa oo waad og tahay.
Maqaalkan, waxaan ku siin doonaa is -tuska kaas oo ah dagaalka Mercari vs Poshmark si aad u ogaato midka midkood yahay tagitaanka dukaanka waqtiyada casriga ah ee 2022. Horay u akhri si aad u hesho xaqiiqooyinka iyo gunaanadyada ku saabsan waxaad ka heli doontaa mid kasta oo ka mid ah meelahan.
Waxaa aasaasay shintaro yamada barnaamijka caanka ah ee e-commerce waxaa la bilaabay bishii Luulyo 2013 joogsi buuxa muddo gaaban gudaheed wuxuu noqday iibiyihii ugu jeclaa Japan si uu u iibsado suuqa. Tan iyo markaas wuxuu ku fiday dalal kale oo ay ka mid yihiin Mareykanka iyo Ingiriiska. Waxaa iska kaashaday iskaashigeeda FedEx iyo hay'adaha kale ee gaarsiinta waxayna muujineysaa in iibsashada iyo iibinta dibedda aysan ahayn dhib.
XIDHIIDHKA: Sida Loo Bilaabo Boutique Online ah 2022: Hagaha Ugu Dambeeya, Tallaabo-tallaabo
Badeecadeeda asaasiga ahi dabcan waa app -ka moobiilka ee macari ee loo heli karo in lagu soo dejiyo aaladaha IOS iyo Android.
Manish Chandra wuxuu bilaabay Porsche Macan 2011. Tan iyo markaas waxay nafteeda u abuurtay meel ku wanaagsan waaxda ganacsiga e-commerce. Poshmark Waxay xooga saareysaa iibinta dharka iyo qalabka dharka marka loo eego badeecadaha kale.
Waxaad booqan kartaa bogga rasmiga ah ee Poshmark halkan. Saxiix!
MAXAA KEENA QORSHAHA E-COMMERCE-KA WANAAGSAN?
Si aad si sax ah ugu xukuntid dagaalka Mercari vs poshmark waa inaan marka hore ogaannaa dhinacyada madal suuqgeynta internetka oo lagama maarmaan u ah inay qanciso iibsadayaasha iyo kuwa wax ku iibiya madasha. Meel ecommerce wanaagsan waa inay asal ahaan lahaataa saldhig macmiil oo weyn oo ay fududahay inaad ku shaqayso adiga, isticmaalaha.
Dhagaystayaasha La Heli Karo
Iibinta Khidmadaha & Maraakiibta. (khidmadaha badan micnaheedu waa macaash yar)
Waqtiga Bixinta. (Intee in le'eg ayay qaadataa in la ururiyo faa'iidadaada.)
Horumarinta & Fikradaha. (Fursadaha ayaa ah, ma noqon doontid qofka kaliya ee iibinaya waxaad iibineyso. Maxaad sameyn kartaa si aad uga gooyso dadka badan)
DHEGAYSIGA WAXAA LA HELI KARAA
Marka lagu daro saldhigeeda macmiilka Japan ee baaxadda leh (94% dadka wax ka iibsada e-Japan ee adeegsada Mercari), dalabka Mercari wuxuu urursaday in ka badan 100 milyan oo la soo degsado adduunka oo dhan. Calaamadda Mercari ayaa bilihii la soo dhaafay aad u xoogeysanaysay, dalal kale gaar ahaan Mareykanka.
Gaaban aaladda nukliyeerka ayaa sheegaysa inaysan jirin baahi yar oo loo qabo badeecooyin kala duwan. Qalabka isboortiga, dahabka, qalabka iyo dharka fudud ayaa ah badeecadaha ugu badan ee la iibinayo.
Mercari wuxuu ku raaxeystaa faa iido weyn goobaha kale ee e-commerce sababta oo ah siliibkeeda, app-ka si sahlan loo isticmaali karo. Inta badan barnaamijyada kale ee e-commerce waa kuwo dhalaalaya oo ay adag tahay in la shaqeeyo.
Poshmark waa eey suuqa ku jira oo ku faanaysa 55 milyan oo kaliya oo lagu daray isticmaaleyaal (miyaan idhi “kaliya”). Si kastaba ha ahaatee waxay ka dhigaysaa tan iyada oo leh suuq gaar ah. Sanadka 2022 Poshmark waa goobta ugu wanaagsan e-commerce ee lagu iibiyo dharka iyo qalabka dharka.
XIDHIIDHKA: Amarka Iibinta iyo Amarka Xadka: waa maxay faraqa u dhexeeya?
Iibinta khidmadaha iyo dhoofinta
Mercari wuxuu jaray 10% dhammaan alaabtii la iibiyey. Liisaska gabi ahaanba waa bilaash waana sahlan tahay in la daweeyo. Goobtu waxay ku faantaa xulashooyin dhoofineed oo duurjoog ah. Xitaa waxaa jira ikhtiyaar marka iibiyeyaashu ay dooran karaan inay iska bixiyaan khidmadda maraakiibta.
Liis garee waxyaabaha gabi ahaanba waa bilaash. Komiishanka ay qaataan ayaa ka sarreeya (20%) marka loo eego kan Ameerika (15%) ee alaabta ka badan $ 15. Waxay leedahay sicir maraakiib siman oo ah 7.11 doollar iibka culeyskiisu ka yar yahay 5 lbs waxayna qaadataa $ 2.11 iibka miisaankiisu yar yahay. Poshmark wuxuu adeegsadaa boostada mudnaanta leh ee USPS si aadan uga walwalin bixinta gaabiska ah.
Si ka duwan fikradaha kale, iibsade ahaan, sicirka khiyaanada ee madalkan ayaa ah kan ugu hooseeya ee aan ku arkay goob kasta oo e-commerce ah arrintaas. Si kastaba ha ahaatee si ay taasi u sii ahaato mid suurtogal ah, waxaa jira cillad yar. Dib -u -dhaca ayaa ah in lacag -bixinta dib loo dhigi karo maalmo, tani waa sababta oo ah iibsaduhu waa inuu xaqiijiyaa in wixii uu/ay iibsatay ay si guul leh ku gaareen xaalad wanaagsan. Haddii iibsaduhu ku guuldareysto ama iloobo inuu qiimeeyo iibiyaha lacagaha weli waa la siidaayaa 5 maalmood oo shaqo kadib.
MA JIRAAN DADLAYAAL?
Hagaag, waxaa jira dad raadinaya inay ku khiyaaneeyaan laakiin Mercari waxay qabatay jaadad badan oo loogu talagalay kuwa wax iibsada bilihii la soo dhaafay.
Si arrintan loo xaliyo, oo ay weheliyaan siyaasadaha cusub, waxay abuureen sifo Iibsadayaasha iyo Iibiyeyaasha labadaba looga baahan yahay inay qiimeeyaan adeegga midba midka kale.
Tani waxay ka caawineysaa shaqaalaha inay ogaadaan cidda suuqa si dhab ah wax uga iibsanaysa iyo cidda khiyaanada samaynaysa.
Lacag -bixinta summada leh oo dhakhso leh oo fudud. Lacag -bixinta ayaa isla markiiba la socodsiiyaa kadib iibsiga joogsiga buuxa looma oggola lacag -celin.
Horumarinta iyo warcelinta
Mercari wuxuu ku sii xoogeysanayaa warshadaha e-commerce isagoo si joogto ah u soo bandhigaya siyaasado xor iyo xalaal ah. Mercari marmar waxay samaysaa xayeysiisyo lacag la’aan ah sababo kala duwan oo ay ka mid yihiin qiimo dhimis aad u weyn maalmaha ciidaha taas oo ay aad ugu farxaan macaamiisheeda.
XIDHIIDHKA: Maalgelinta Hantida Guryaha ee 15 ee Bilowgayaasha 2022
Waa suurtogal oo waa sahlan tahay in kor loo qaado liisaskaaga (lacag yar) oo alaabtaada la hor mariyo macaamiil badan oo doonaya inay iibsadaan. Waxay sidoo kale ku faantaa madal wada sheekeysi gaar ah oo kuu saamaxaya inaad si gaar ah ula falgasho iibsadayaasha.
Eeg Sida Lacag Bilaash ah Loogu Helo Mercari: Hesho Dhibco Bilaash ah Maalin kasta
Poshmark waxaa loo qaabeeyey qaab bulsheed inta ay tani u fiican tahay micnaheedu waa inaad geliso shaqo iyo waqti badan si aad u hesho macaamiisha.
Faallooyinka iyo dib -u -eegista ayaa ku samayn kara ama ku jebin kara. Marka la eego siyaasadaha Poshmark waxay soo bandhigtay qaddar wanaagsan oo ah sharuudaha iyo hagaajinta si loo hagaajiyo waayo -aragnimada macmiilka.
Poshmark wuxuu sumcad ku leeyahay adeegga macmiilka oo liita. Way adag tahay in lagu faafiyo alaabtaada Poshmark sharadkaaga ugu fiican waa inaad la wadaagto maradaada aaladaha kale ee warbaahinta bulshada sida Facebook, Instagram iyo Twitter.
Marka la eego dhammaan macluumaadkaan adiga ayaa kuu hartay inaad doorato midka ugu fiican ee buuxiya shuruudahaaga. Adeegga e-commerce ee ugu fiican ayaa hubaal ah inuu ku guuleystay dagaalka Mercari vs Poshmark, waxaan sheegay xaqiiqooyinka; dooro guushaada.
Mercari waxay qabatay shaqo wanaagsan oo wanaajisay barnaamijkooda moobaylka iyagoo soo bandhigaya astaamo cusub oo ka dhigaya waayo -aragnimada wax iibsiga mid raqiis ah oo fudud.
Poshmark waa u-iibsiga iyo iibinta dharka, dahabka iyo qalabka kale ee dharka. Shaki kuma jiro iibiyeyaasha ku takhasusay badeecadaha wax iibiya inay la kulmaan heer aad u sarreeya.
Mar labaad wax kaa hortaagan inaad koonto ka furato labadaas meeloodba.
Si aad ugu bilowdo barnaamijka Mercari guji Halkan si aad u soo dejiso.
Waxaan sidoo kale ku talineynaa waxyaabaha soo socda:
Sida Loo Bilaabo Meheradda ECommerce -ka 2022 -ka
Waa maxay Dukaanka Dhoofinta ee ugu Lacagta Badan 2022?
15 Website -yada Qoraaga ugu Fiican 2022 | Tilmaamaha Dhamaystiran ee Abuuritaanka mid | Shaxda
Qoraaga ahaan, waxaad u baahan tahay dhiirigelin si aad u abuurto degel qoraaga weyn si aad shaqadaada ugu qaado…
Inkasta oo aan la qiyaasi karin hubinta ganacsiga laga bilaabo dhalashada, gelitaanka ganacsiga iyo caymiska ...
Immisa ayuu ku kacayaa Dayactirka AC?
Ma waxaad raadineysaa inaad dib u hagaajiso AC-gaaga oo waxaad la yaaban tahay inta ay le'eg tahay qiimaha dayactirka AC? Bal qiyaas in aad…